Version 0.3.0 – Bing (MSN) mpandika teny
Jolay 23, 2009 amin'ny tolotra 1 Comment
Mirehareha isika manampy fanohanana amin'ny fanafahana ity fandikan-teny ny faharoa maotera. Ity iray ity dia ny Bing (MSN) mpandika teny amin'ny Microsoft.
Ny vokatra dia manome no somary miavaka amin'ny ireo izay mahazo avy amin'ny Google mandika, indraindray tsara kokoa, indraindray ratsy kokoa.
Ny kely nihemotra ny Default fampahavitrihana izany fanompoana izany dia mbola ao Beta sy ny manasa takiana, Manana vola kely tena afaka mizara izany raha tianao iray, fotsiny hevitra mikasika ity lahatsoratra ity, tonga aloha – nanompo voalohany fototra.
Koa – izahay tsy nampahavitrihana Bing mpandika teny ho toy ny Default mandeha ho azy nefa mpandika teny ary mba ta-handre ny heviny momba izany. Raha toa ka mangataka izany ny olona ampy endri-javatra, dia nanao ezaka bebe kokoa ho afaka izany amin'ny andro ho avy fanafahana. Ao amin'ny mandritra izany – ianao nandray ny hizaha toetra ity toerana ity tarehin-javatra ao amin'ny, nanomboka nandika fotsiny ary mampiasa ny Bing bokotra kevitra.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: Bing (MSN) mpandika teny, dikanteny google, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress plugin
Judy C milaza
Novambra 25, 2009 amin'ny 12:19 am
Hi Te-hiezaka handika Bing azafady, isika tsy faly amin'ny Google manerantany mandika violatiing TOS ary tiantsika ny mifamadika ary te hanandrana hafa iray.